Qeerroo-Oromia: Naafxanyaa Haarawa amannee Hoomacha Hammaarre – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroo-Oromia: Naafxanyaa Haarawa amannee Hoomacha Hammaarre
#Oromia #Ethiopia #Qeerroo
Naafxanyaa Haarawa amannee Hoomacha Hammaarre
Jechi naafxanyaa jedhu asliin isaa afaan warra Arabaa irraa madde. «Eeyyeen afaan warra arabaatti naafxanyaa jechuun qowwee jechuudha.» Hiikkaa biraa hin qabu! Madaala humnaa qawweetuu jijjiire. Naafxanyoonni afaan qawweetiin Oromiyaa cabsanii biyya Oromoo qabatan naafxanyaa jedhaman. Naafxanyaa jechuun gabroomfataa jechuudha. Naafxanyaa jechuun qubataa jechuudha. Naafxanyaa jechuun gitaa fi sirna cunqursaa jechuu dha. Naafxanyaa jechuun saba kamiinuu hidhata hin qabu. Naafxanyaan gitaa fi sirna cunqursituutti malee saba hin qaban. Naafxanyaan gita, gosa lammii fi saba hin qabu. Gitni naafxanyaa saba kamuu keessaa madduu ni dandaya. Naafxanyaan dhalootaan Oromos fi saba birallee tawuu ni dandaya.
Naafxanyaanaan gita-gabeelchaadha (hybrid class and identity) jecuun ni dandayama. Gitni naafxanyaa, saba kamuu keessaa madduu ni dandandaya. Walitti heerumiinsi Goobana Daacee fi Meneliki ijaarama gita naafxanyaatiif raga qabatamaa seenaati.
Yeroo ammaa kana gitaa fi sirni naafxanyaa haarawaa Oromiyaa fi Itoophiyaa dhuunfataa jira. Kun dhugaa haalamuu miti. Gitni naafxanyaa haarawaa qarayyoota Oromootii fi Amaaraatiin durfama. Akeekni isaa Itoophiyaa afaan tokko dubbattu, amantii Orthodosii hordoftuu fi alaantummaa gita bittuu Ammaarattii sagaddu deebisuudha. Kun ifatti muldataa jira.
Yeroo ammaa kana gitni naafxanyaa haarawaa mootummaa Abiyi Ahmediin durfama. Mootummaan Abiyyi Ahmedi dhibdee Koronaavirusti gargaaramee aangoo isaa cimsachuu barbaada. Kun tasuma Oromoof hin tawu!
Mootummaan Abiyyi Ahmedi filmaanni demokiraatawanis akka hin geggeeffamne gufuu hundumaa karaa irratti guuraa jira.
1. Oromoon humna qabu hundumaa bakka tokkotti deebisuu qaba
2. Filmaata kanaraatti humniti walabummaa Oromiyaa mootummaa naafxanyaa haarawaa mooyatuu qaba.
3. Yoo filmaanni kun gufate sirna naafxanyaa haarawaa humnaan haxaayee walabummaa isaa gonfachuu qaba!
Amaaan Kedir Qaamsare
Haha_Ajaa’iba! Namoonni Gariin Badhaasa Rabbi Oromoof kenne Isa WBOn bineensa Oromiyaa qalatee nyaatu”arganii itti hinaafuufi qeequu barbaadu”Aboo ilma namaatiibar akkumakeeti nyaatu malee hinjiraatuum” Tuf, tuf nyaadhaa siniif haasifasyu jedhama, yaa nyaattuu yaa ilmaan budaa!!
ጀግኖቹ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት (የጃል መሮ ጓዶች) ማን ናቸው? ምን አይነት ስብዕና አላቸው? ቄሱ በአንደበታቸው ስገልጹ።
AGM: Bilxiginnaan Godina Arsii Lixaa Aanaa Nansabootti Miseensota KFO hidhaa Jirti.